စိုက်ပျိုးခြင်းနည်းနာများ | Potatoes USA
U.S. အာလူးစိုက်ပျိုးသူများတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌အကောင်းဆုံးဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော အာလူးများစိုက် ပျိုးရန်အတွက် ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြံုနှင့် အရင်းအမြစ်များရှိကြသည်။ အောက်ပါ နည်းနာများကြောင့် အရည်အသွေးပြည့်အာလူးများရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရုတစိုက်ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း နည်းလမ်းများ
ရောင်းချရန်ရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးသော U.S. အာလူးများကို အရည်အသွေးမြင့် အာလူးမျိုးဥများဖြင့် စိုက်ပျိုးသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အာလူးမျိုးဥဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက် USDA မှသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခံရပြီး အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု ရှိမှသာလျှင် သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ မျိုးဥထုတ်လုပ်သူများသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် လုပ်ဆောင်ရသည်။
မျိုးဥကို ရောဂါပိုးမွှားဖြစ်ပွားနိုင်ချေမရှိစေရန် သန့်စင်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ဖန်လုံအိမ်များတွင် အရည်အသွေးပြည့် မျိုးခံပင်များမှတစ်ဆင့် မျိုးပွားသည်။..
ပါဝင်ပစ္စည်းများကို တစ်သျှူးမွေးမြူထုတ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ရာနှုန်းပြည့်ရယူပြီး ရောဂါစမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်သုညဖြင့် တပြေးညီစမ်းသပ်သည်။ .
အကန့်အသတ်ထားသော မျိုးဆက်စနစ်သည် ရောဂါပွားများလာမှုကို ကန့်သတ်ပေးပြီး တစ်မျိုးချင်းစီအလိုက် သန့်စင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ယခုစနစ်အရ ယူအက်စ်မျိုးဥ အသုတ်တစ်သုတ်ကို ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလည်ပတ်မှုထဲတွင် ၅ နှစ်ထက်ပိုပြီး မထားချေ။.
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ၊ သိုလှောင်ရုံစစ်ဆေးမှုများ၊ ရိတ်သိမ်းပြီးစစ်ဆေးမှုများနဲ့ တင်ပို့မည့်နေရာစစ်ဆေးမှုစသည့် စစ်ဆေးမှုများအပါအဝင်၊ ရေသန့်စင်ရေးစနစ်နဲ့ မျိုးဥကို ကြာရှည်ခံထားခြင်းတို့နဲ့ သက်ဆိုင်သော တင်းကျပ်သည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာရသည်။
အာလူးစိုက်ပျိုးသူများသည် အာလူးမျိုးပေါင်း ၁၀၀ခန့်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး အများစုအား စားသုံးရန် နှင့် ကြာရှည်ခံပြုလုပ်ရာတွင်ကောင်းသည်ထက်ကောင်းစေရန်သုတေသနများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အာလူးစိုက်ပျိုးသောဒေသများတွင် ပြည့်ဝသောမြေဆီလွှာနှင့် အာလူးစိုက်ပျိုးရန် အထူးသင့်တော်သော ရာသီဥတုတို့ရှိသည်။ နွေရာသီနေ့ပိုင်းများသည် ပူပြင်းရှည်လျားပြီး ညဖက်များတွင် အေးသောရာသီဥတုသည် အာလူးစိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သည်။ အေးခဲသော ဆောင်းညရှည်များသည် ပိုးမွှားများနှင့်သီးနှံရောဂါများဖြစ်ပွားစေမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထိုအချက်များကြောင့် အမေရိကန်ရှိအာလူးစိုက်ပျိုးသူများသည် ၎င်းတို့အာလူးများအတွက် ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာ အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းသည့် အာလူးများကို စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ စိုက်ပျိုးသူများသည် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းမှုကို အထူးဂရုပြုကြသည်။ မြေနေရာတစ်ခုတွင် ၃-၅နှစ်အကြာမှ တစ်ကြိမ် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အာလူးကို အလှည့်ကျ စိုက်ပျိုးသည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် သီးနှံကောင်းမွန်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သောလယ်မြေရရှိနိုင်ရန် သေချာစေသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရာသီအစတွင် လယ်သမားများသည် အသိအမှတ်ပြု စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ၎င်းတို့လယ်ရှိ မြေဆီလွှာအာဟာရပြည့်စုံမှု ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးကြသည်။ Global Positioning Systems (GPS) သည် လယ်မြေအားစစ်ဆေးပြီး မြေသြဇာလိုအပ်သောနေရာများနှင့် မလိုအပ်သောနေရာများကို ဖော်ပြသည်။ အာလူးစတင်စိုက်ပျိုးချိန်တွင်လည်း လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များက စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ မြေဆီလွှာအစိုဓာတ်ရရှိမှုအဆင့်၊ မြေသားနှင့်သကြားဓာတ်ပါဝင်မှု စသည်တို့ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
တိကျသောရေပေးဝေမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာများဖြင့် မြေဆီလွှာရှိ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် ရေငွေ့ပျံမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။ ရေဓာတ်လိုသလောက်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရေပေးဝေမှုစနစ်တွင် GPS နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ လယ်သမားများ ရေပေးဝေမှုစနစ် ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအဖြစ် ရာသီဥတုအားစောင့်ကြည့်သည့်စနစ် ကိုအသုံးပြုသည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အာလူးများ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသာ ဂရုပြုရမည်မဟုတ်ဘဲ အာလူးတွင်ပါဝင်သော သကြားဓာတ်သည် သိုလှောင်မှုနှင့် ကြာရှည်ခံပြုလုပ်မှုအတွက် သင့်တော်သော အဆင့်တွင် ရှိ၊မရှိကိုပါ ဂရုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အာလူးစိုက်ပျိုးသူများသည် အာလူးများရိတ်သိမ်းချိန်၊ စစ်ဆေးချိန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်များတွက် အလေအလွင့်နည်းစေရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ကိရိယာများတွင် ရင်းနှီမြုပ်နှံကြသည်။ သီးနှံများသည် USDA အေဂျင်စီများ၏ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ ထို့နောက်မှ ကြာရှည်ခံပြုလုပ်ရန်အတွက် (သို့) အရည်အသွေးနှင့် အာဟာရဓာတ်များ အကောင်းဆုံးရှိနေစေရန် ရာသီဥတု အလိုက်သိုလှောင်ရန်စီစဉ်ထားသောနေရာများသို့ ပို့ဆောင်ကြသည်။